Archive du 20190223
1157 miliara ariary nanjavona Hohenjehina ny olon-dRajaonarimampianina…
Mametraka ny politika tsy misy fandeferana na “zero tolerance” eo anatrehan’ny fahatrarana trangana kolikoly, indrindra ny fitantanana ny raharaham-panjakana ny fitondrana.
Politikan’ny fitsitsian’ny fanjakana Mifanipaka ny zavatra lazaina sy ny atao
Ambara fa miditra amin’ny fitsitsiana ny fanjakana, ka nahena ho 22 isa ireo mpikamban’ny governemanta, raha 28 teo aloha. Seho ivelany anefa no betsaka ao anatin’io raha tarafina amin’ny tena zava-misy marina.
Ben’ny tanànan’i Toamasina Naongan’ny Mpanolotsaina monisipaly
Mifanenjana indray ny ben’ny tanànan’i Toamasina voalohany sy ny mpanolotsaina monisipaly ankehitriny.
Filohan’ny CENI Manara-maso ny fifidianana any Sénégal
Iray amin’ireo mpanara-maso ny fifidianana any Sénégal ny Filohan’ny vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana eto amintsika (CENI)
Fanolorana faneva ho an`ireo jeneraly Tsy tonga ny filoham-pirenena
Notolorana faneva omaly teny Ivato ireo manamboninahitra jeneraly 61 nasondrotra tamin`ny taona 2018.
Solontena maharitry ny PNUD I Marie Diamond no hisolo an’i Violette Kakyomya
Omaly zoma 22 febroary no nanolotra ny taratasy manendry azy ho solontena maharitry ny sampandraharahan’ny firenena mikambana mikasika ny fampandrosoana na ny PNUD
Fiompiana, jono ary fambolena Mpitsidika 30 000 no andrasana amin’ny tsenabe FEPA
Nampahafantarina omaly zoma 22 febroary tetsy amin’ny MPE Nanisana ny fisian’ilay foara lehibe momba ny fiompiana sy ny jono ary ny fambolena andiany faha-11.
Polisy nahavanon-doza Novonoiny ny vadiny, naolany ny zanany
Ny alin’ny 16 febroary 2019 tokony ho tamin’ny 09 ora no tonga niantso vonjy sy nametraka fitoriana teo anivon’ny « Division de la Police des Mœurs et de la Protection des Mineurs »
Fanabeazana ny tanora Miha sarotra, hoy ny skoto
Nankalazaina maneran-tany omaly zoma 22 febroary ny andro naterahan’ny raiben’ny skotisma, Baden Powell. Anisan’ny nanamarika izay ihany koa isika eto Madagasikara.
Ben’ny tanana avy any Soavinandriana Itasy Mitaraina ho mbola tsy naharay ny vola fanampiana …
Nivoaka tamin’ny fahanginana ireo Ben’ny tanàna avy any Soavinandriana Itasy, manoloana ny tsy naharaisan’izy ireo ny vola fanampiana “Comité Locale de developpement” ampahany tamin’ny taona 2017-2018.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Razafindralambo Bayard Jockey niofo ho mpilalao basikety
Mbola hijanona eo amin’ny taranja Basikety baolin ihany isika, amin’ity andiany faha-4 amin’ity taona 2019 ity, hitaterana an’ireo Kintan’ny
Mandany andro amin’ny fisaorana ?
Tsianjerin’ny ankizy nanabeazana azy fahazaza ny hoe « Raha misy manome zavatra ho anao, kingà miteny hoe misaotra tompoko ! ».
Fanadinana bakalorea Tsy ekena intsony ny fahataran’ny fisoratana anarana
Nampatsiahy ny rehetra ny minisiteran`ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa amin`ny alatsinainy 25 febroary ho avy izao no hanomboka ny fisoratana anarana ho an`ireo hiatrika ny fanadinana ara-panjakana bakalorea ka tsy hifarana raha tsy ny talata 30 aprily 2019.
Fasan’ny Karana Vehivavy iray voadonan’ny taksibe 194
Sahotaka ny teny akaikin’ny Toby fiantsonan’ny fiara eny amin’ny Fasan’ny karana Ankadimbahoaka omaly atoandro. Fiara iray ao anatin’ny koperativa Mirindra Zotra 194 mantsy no voalaza fa nandona olona teny an-toerana.
Seha-Pivoarana sy Andraharahana eto Madagasikara Mitaona ny mpandraharaha rehetra hivondrona
Noho ny fiaraha-miasa eo amin’ny fitantanana ankapoben’ny hetra sy ireo mpikambana ao amin’ny Seha-Pivoarana sy Andraharahana eto Madagasikara (SPAM) dia nisy ny fiofanana nataon’izy ireo omaly tetsy amin’ny Cotisse Ambodivona.
FANAFIHANA TENY MAHITSY
Omaly no nafinra eny Tsiafahy ireo olona valo izay nosamborina momba ny raharaha fanafihana teny Mahitsy.
“La Réunion kely” Havadika ho fokontany ve ?
Ankohonana 18 amin`ny 119 etsy La Réunion Kely no nisitraka kaontenera miendrika trano fonenana fanomezana avy amin`ny filoham-pirenena ny alakamisy lasa teo.
Tranombarotra fivarotana finday sy kojakoja Niampy iray indray ny eto an-drenivohitra
Mirongatra ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Ankoatra ny sinto-mahery dia mahazo laka ihany koa ny fanendahana.
SOARANO Voasambotra ilay mpisoloky mpanao fandraikirekena
“Raisiny tanana avokoa ny mpivarotra na safoin’ilay mpanao ratsy ny lamosina na ametrahany tanana ny sandry. Avy eo tsy tompon’ny tenany fa tratran’ny be manaiky izy ireo.”
Fanararaotam-pahefana any Brickaville Mampitaraina ireo marary
Velon-taraina tanteraka ireo marary manodidina ny tobim-pahasalamana iray any Brickaville noho ny afitsoky ny lehiben’ny mpitsabo iray any an-toerana.
Ady amin’ny delestazy Ny firosoana amin’ny angovo azo havaozina no tena vahaolana
Nifarana teny amin’ny Hotely Panorama Andrianarivo omaly zoma 22 febroary ny herinandron’ny angovo.